Izindlela Zokungcwaba eNingizimu Afrika - Sendoff Funeral App
Izindlela Zokungcwaba eNingizimu Afrika
Abantu abaningi bakhetha ukungcwatshwa njengokukhethwa kokuphela kwempilo. Lokhu kungahle kube ngenxa yezizathu zenkolo noma zomuntu siqu. Kodwa-ke, awukho umhlaba owanele eNingizimu Afrika wamathuna amasha. Ngakho-ke, kunesidingo esiphuthumayo sokuhlola ezinye izindlela zokungcwatshwa kwendabuko.
Kulesi sihloko, sizobheka ezinye izindlela zokungcwaba.
Ezinye izindlela ze-A Burial
Amadolobha amakhulu aphelelwa ngumhlaba ukungcwaba abafileyo.
Amadolobha amakhulu anjengeGoli, iTheku neCape manje aseseka kakhulu imigomo yokungcwatshwa nezinye izindlela. Ngenkathi kungahle kungacabangi ukucabanga ngakho, kungenzeka kungakhathazeki kunomcabango wokuphinda usebenzise amasayithi ethuna.
Nazi ezinye izindlela ezihlukile ongabeka ngazo othandekayo wakho ukuba aphumule, ngaphandle komngcwabo:
# 1. Ukunikela Komzimba
Le yindlela enhle yokufaka isandla ekukhuleni kwesayensi nezokwelapha. Izikole zezokwelapha zisebenzisa ama-cadavers abantu (imizimba) ukufundisa abafundi i-anatomy nezinqubo zokuhlinzwa.
Lezi zikole zisebenzisa futhi ama-cadavers ukutadisha izifo ezifana nesifo i-Alzheimer’s neParkinson futhi afune ukwelashwa.
Uma ufuna ukusiza iplanethi, yenza umsebenzi omuhle emphakathini futhi ugcine izindleko ezinkulu zomngcwabo wendabuko, ukunikela ngomzimba kuyindlela enhle impela. Singeze ezinye izixhumanisi ekugcineni kwendatshana lapho ungathola khona eminye imininingwane.
# 2. Ukungcwatshwa kwemvelo
Lokhu kwehlukile kumngcwabo ojwayelekile ngoba umzimba awuhlanganisiwe. Azikho izinto zokwakha amathuna afana nalokho
okungasetshenziswa kumathuna athile anamuhla.
Esikhundleni salokho, ikhaya lomngcwabo lizobeka isidumbu ebhokisini elingahle lisebenze. Lokhu kuvumela umzimba wesithandwa sakho ukuba ube biodegrade ngokwemvelo.
Ukungcwatshwa kwemvelo kungabiza kakhulu kunokungcwatshwa kwendabuko. Kanye nokungasebenzisi izinsiza zokulondolozwa eziyingozi namakhemikhali asiza i-ecosystem.
Kungahle kube nezizathu zokuziphatha noma ezinye izizathu zomuntu siqu zokungafisi ukusebenzisa ukuhlanganisa noma izinsiza zokugcina kanye namakhemikhali.
# 3. Ukuqunjelwa
Abantu abaningi bakhethe ukushiswa ezikhathini zamuva. Lokhu kungenxa yokuthi kunezinketho eziningi kunokungcwatshwa kwendabuko.
Ungabeka izinsalela ezishisiwe ku-urn noma kwi-columbarium emathuneni. I-columbarium yisakhiwo lapho ungagcina khona ama-urns omakiwe abathandekayo.
Imindeni ingahambela ngendlela efanayo nokuhambela itshe eliyinhloko. Enye indlela ukugcina izinsalela ezishisiwe ekhaya noma zisakaze umlotha.
Sekukonke, kuyindlela eguquguqukayo uma uyiqhathanisa nomngcwabo wendabuko.
# 4. Mushroom Suit
Uma uxhasa ukunyakaza okuluhlaza, ungathanda lokhu. Lokhu kufaka ukungcwaba umzimba ngesudi eyenziwe ngokotini we-organic, oboshwe ngezinsimbi zamakhowe.
Isudi iguqula umzimba we-biodegraded ube yinto ephephile yemvelo. Ifaka ubuthi emzimbeni womuntu bese iwaguqula abe yizakhi zomhlaba.
Izindleko zingabiza kakhulu kunokungcwatshwa kwendabuko kepha zinikela ngokuzinzileyo ohlelweni lwezemvelo.
Ngakho-ke, uma ucabanga ngomngcwabo ohlukile, lokhu kungafanelana. Kuyamangaza ukuthi umlingisi uLuka Perry.
wakhetha umngcwabo wesudi yamakhowe lapho edlula muva nje.
# 5. Bio Urn
Le yindlela enhle yokukhumbula abathandekayo abadlulile. Futhi, uma ucabangele ukuba yisihlahla ngemuva kokuba ufe, ungabheka kulokhu.
Le ndlela ivame ukubizwa ngokuthi umngcwabo wesihlahla futhi inikeze izinzuzo ezinkulu ku-ecosystem. Kubandakanya ukutshala kwesihlahla esincane ngaphakathi kwe-urn, kuhlukaniswe nomlotha.
Lapho-ke izimpande zivuthwa, zihlangana nomlotha bese zikhula. Ngakho-ke, isihlahla sangempela, isitshalo, noma imbali iyavela ngenxa yalokho.
AboutResourcesOur ServicesService Providers